Shiinaha Customized bac-Shopper-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Boorsada gacanta > Bacda jeexjeexa
Aynu eegno sida loo keydiyo bacda wax lagu gado. Marka hore, qeybta gacanta geli boorsada, ka dibna laab labada dhinac ee bidix iyo midig dhexda, ka dib laab qeybta hoose, ka dibna laabo qeybta kore, ugu dambeynna qeybta hoose geli booska. la helay, ma qabsan doono boos.
1. Sida loo Xidho Bacaha Wax Iibsiga:
(1) Aan eegno sida loo keydiyo boorsada wax lagu gado. Marka hore, qeybta gacanta geli boorsada, ka dibna laab labada dhinac ee bidix iyo midig dhexda, ka dib laab qeybta hoose, ka dibna laabo qeybta kore, ugu dambeynna qeybta hoose geli booska. la helay, ma qabsan doono boos.
(2) Hesho bacaha Bal hada aan eegno sida loo helo bacaha balaastikada ah, ugu horeyntii in la diyaariyo kartoonada loo yaqaan 'Courier kartoon', aalad kartoon u eg oo isku laaban oo ka tageysa furitaan, bidixna haysa dhamaadka caaga balaastigga ah ee kartoonka ku jira banaanka, ka dib bac balaastig ah geesaha ka mari, ka dibna kartoonka galkiisa sidoo kale banaanka ayuu uga tagay.
2. Halbeegyada Boorsada Gabdhaha Mudis (Tilmaamo)
3. Farqiga u dhexeeya suufka saafiga ah iyo suufka polyester-ka ee ku jira maaddada bacda shiraaca
Hadda baahida suuqa ee bacaha shiraaca waa sii kordheysaa, waxaan sidoo kale u nimid kuwa soo saara bacda shiraaca si ay u fahmaan aqoonta sheyga.
Canvas waa dhar qaro weyn oo cudbi ah ama linen ah. Taasi waa, waxyaabaha ugu muhiimsan waa suuf, hemp iyo polyester.Waxaan u isticmaalnaa shiraac si aan u sameysano bacaha illaa inta ay ka jiraan shiraac nadiif ah oo suuf ah iyo shiraac polyester suuf ah iyo maro linen suuf ah, inta badan waan fahamsanahay Farqiga u dhexeeya dharka suufka iyo dharka suufka polyester marka hore.Cadka cudbigu waa maro ka samaysan dun dun ah.Waa erey guud oo dhammaan noocyada kala duwan ee dharka cudbiga ah.
Marka laga eego aragtida dharka dhammaaday, suufka saafiga ah iyo suufka polyesterka ma ahan kala duwanaansho weyn, suufka saafiga ah wuxuu dareemayaa raaxo badan, jilicsan oo u dhow jirka, nuugista qoyaanka, marinka hawada waa mid aad u wanaagsan, laakiin cillad darrida ayaa fududahay in la dhimo, wax fudud in la duuddubo, muuqaalka ma ahan mid toosan oo qurux badan, waa in inta badan bir laga dhigaa. dhammeystir, kuwaas oo sidoo kale ah sababaha muhiimka ah ee bacaha shiraacda badanaa loo doorto.Qufka saafiga ah way fududahay in la dheeho laakiin xadka midabku uma cadda sida suufka polyesterka, qiimaha dabiici ahaan wuu ka sarreeyaa suufka saafiga ah ee suufka polyester-ka ah.
5. Baakadaha iyo keenida bacaha wax lagu gado
Calaamadaha kulul: Boorsada jeexjeexa, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka